NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ကိုထုတ်လုပ်သူ LIVE | 979 ၏စာမျက်နှာ 34495 | ၂၀၂၀ NAB Show News: တိုက်ရိုက်လွှင့်ခြင်း၊ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းအင်ဂျင်နီယာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ရေဒီယိုနည်းပညာနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသတင်းများ။ NAB ပြရန် 2020 ။
မည်သည့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့မဟုတ်အသံဆက်သွယ်မှုအတွက်မဆိုကောင်းမွန်သောပါဝင်မှုသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မြက်ပင်ချိုင့်ကိုအထူးပြု ...
စျေးကွက်တွင်အရည်အသွေးမြင့်မားသောအသံနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်ကုန်များအတွက်မည်သူမဆိုအတွက် ၂၀၂၀ NAB Show သည် ...
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် - ၆၇ ကြိမ်မြောက် MPSE Golden Reel Awards ဆုပေးပွဲသို့တက်ရောက်သူများသည်ဂရမ်မီဆုရစံချိန်ကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ယခုနှစ်သည်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အမှတ်ရစရာအခိုက်အတန့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး ၂၀၂၀ NAB Sho ...
ကိုလံဘီယာရုပ်ပုံများ '' Jumanji - The Next Level၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် hit မှဂိုဏ်း၊ Jumanji - J ကိုကြိုဆိုသည်။
ဘာ့ဟင်နရီ (source: American Television ၏မော်ကွန်းတိုက်) အမေရိကန်ရုပ်မြင်သံကြားစက်ရုံဆုံးရှုံးမှု ...
အမေရိကန်ရုပ်ရှင်ပညာရှင်များအသင်း (ASC) သည်ပြဇာတ်ရုံ၌ပါ ၀ င်သည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရှစ်ခုကိုအမည်စာရင်းတင်သွင်းလိုက်သည်။
Podcast / ဖျော်ဖြေရေးလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်လာလျှင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုသည် ...
အကယ်၍ သင်သည်ဖန်တီးမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး podcast / ရေဒီယိုလုပ်ငန်းသည်သင်၏ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းဖြစ်ပါက ...
၂၀၂၀ NAB ပြပွဲတွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်လေ့ကျင့်မှုနှင့်အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ
VFX Legion နှင့် Madam အတွင်းရေးမှူး၏နောက်ဆုံးရာသီ
၀ င်ရောက်စီးနင်းသောနိုင်ငံရေးဒရာမာ၏ဆဌမနှင့်နောက်ဆုံးရာသီ Madam အတွင်းရေးမှူးသည်ပေါက်ကွဲမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၀ NAB ပြပွဲ - ဖျော်ဖြေရေးနှင့်နည်းပညာဖန်တီးမှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောစုရုံးခြင်း
၂၀၂၀ NAB ရုပ်မြင်သံကြားဥက္ကChairman္ဌ၏ဆုသည်သရုပ်ဆောင်တယ်ရီ Crews ကိုရရှိခဲ့သည်
သူတို့ရဲ့အနုပညာနယ်ပယ်မှာသရုပ်ဆောင်တိုင်း၊ ရုပ်ရှင် / ရုပ်မြင်သံကြားဘယ်အမျိုးအစားပဲရှိပါစေ ...
ဒီခရစ္စမတ်ရာသီမှာအားလပ်ရက်စိတ်ဓာတ်နဲ့ပွဲတိုင်းမှာလူတိုင်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ မြင့်မားသော caliber နည်းပညာ nerds များတောင်မှ
ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ဖြေရှင်းချက်သည် AI အင်ဂျင်များကို အသုံးပြု၍ အဆင့်မြင့် LTO8 data tape format mLogica...
Audio Engineer Chad Robertson နှင့်အတူအဝေးမှအားကစားအသံလွှင့်ခြင်းမေးခွန်းနှင့်အဖြေများ
Q: မင်းရဲ့လက်ရှိအခန်းကဏ္Whatကဘာတွေပါဝင်သလဲ။ A: ကျွန်ုပ်သည်အလွတ်တန်းအင်ဂျင်နီယာနှင့်ရောနှောခြင်း၊
ပရိုမိုးရှင်းစျေးကွက် Assistant- ရေဒီယိုအသံလွှင့်
ဟာ Off comments Assistant- ရေဒီယိုအသံလွှင့်စျေးကွက်ပရိုမိုးရှင်းအပေါ်
အဆိုပါစံပြတစ်ဦးချင်းစီထိထိရောက်ရောက်နှင့်ကြီးမားသောမြင်နိုင်လမ်းပေါ်ရှိနေခြင်းနှင့်အတူဖြစ်ရပ်များကွပ်မျက်အဖြစ် On-ဝေဟင်မြှင့်တင်ရေးဒြပ်စင်များနှင့်အစပျိုးကွပ်မျက်အတွက်ပရိုမိုးရှင်းဌာနကကူညီမည်ဖြစ်ပြီး online.Required SkillsMust အထွက်ဖြစ်, အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ပျော်မွေ့, ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းနှင့် directed.Must စွယ်စုံများနှင့် needed.Must အဖြစ်ကိုရှင်းလင်းရန် Channel ကို Cluster အတွက်အစ်မဘူတာကူညီပေးဖို့ဆန္ဒရှိလိမ့်အဖြစ်ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့အသိပညာနှင့်ဥာဏ်ရှိသည်နှင့်ဘူတာများအတွင်းလည်ပတ်အဆင်ပြေသူဖြစ်ရမည်, ဘူတာရုံအဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ကွပ်မျက်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားဖြစ် '' ExperienceMust 18 နှစ်သို့မဟုတ်အဟောင်းတွေနှင့်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါလိမ့် websites.Required ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်အပိုင်း (အချိန်) တွင်
WCHS ABC ရုပ်သံ 8 / WVAH FOX 11 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Charleston စတူဒီယိုတစ်ခုအပိုင်းအချိန်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ရှာကြ၏။ သင်နောက်ကွယ်မှရုပ်မြင်သံကြား၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသင်ယူဖို့လိုပါလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အအလုပ်တစ်ခုပါ! တာဝန်ပေးလိုအပ်ချက်များ Include အဖြစ်ကြမ်းပြင်ဟာ studioCross-လေ့ကျင့်ရေး Overdrive OperatorsOther တာဝန်များကိုထံမှအမျိုးမျိုးသောသတင်းအစိတ်အပိုင်းများ InternetRecording နေ့စဉ် newscastsPreparing လွှ Weathercasts နေ့စဉ် newscastsTeleprompter များအတွက်ဦးတည်: တာဝန်များ Include ဆက်စပ်အလုပ် experiencePunctualityDependabilityMUST ၏ဆက်သွယ်ရေးအတွက်ဘွဲ့သို့မဟုတ်ဆက်နွယ်သောလယ် ​​OR တစ်နှစ်မဆိုအလုပ်လုပ်ဖို့နိုင်တော့မည်နှင့် ည, တနင်္ဂနွေနှင့်အပြုသဘောဌာနများများစွာသောလူနှင့်အတူအပြန်အလှန်ရန် holidaysThe နိုင်စွမ်းအပါအဝင်အားလုံးနာရီ ...
ဟာ Off comments အကြီးတန်း Software Development Engineer အပေါ်
စီမံကိန်းဒရူးပယ်လ်အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်, ဆိုရှယ်မီဒီယာ application များ, ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့်ကြော်ငြာအကောင်အထည်ဖော်မှု၏စိတ်ကြိုက်, စီးပွားကူးသန်း tools များအားဖွင့်, တုံ့ပြန်မှုဒီဇိုင်းအကောင်အထည်ဖော်ရေး, feeds တွေကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ရှာဖွေမှု, မှတ်ပုံတင်, နှင့်ဗီဒီယိုစနစ်များပေါင်းစပ်ပါဝင်သည်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါဆော့ဖ်ဝဲရေးစံချိန်စံညွှန်းများ, ဒီဇိုင်းကိုအသေးစိတ်နှင့်အရည်အသွေးအာမခံချက်စမ်းသပ်ခြင်း coding ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောသတင်း-related က်ဘ်နှင့်မိုဘိုင်း applications များ, စေ့စပ်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူကယ်လွှတ်ခြင်းငှါရည်ရွယ်သူကိုနည်းပညာသမားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ပူးပေါင်းပါလိမ့်မယ်။ - အနိမ့်ကျခွောကျ (6) နှစ် PHP ကို, ဖြစ်နိုင်ရင်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်အကြောင်းအရာ-မောင်းနှင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အသုံးပြု. အကြီးစား, စီးပွားဖြစ်က်ဘ်ဆိုဒ်များကိုဖွံ့ဖြိုးဆဲ - ဒရူးပယ်လ်နှင့်အတူအချို့သောအတှေ့အကွုံမြားအပါအဝငျဒရူးပယ်လ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအနည်းဆုံးနှစ်ခု (2) နှစ် ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူးအပေါ်
ကျွန်တော်တို့သည်ဝါရှင်တန် DC ကဧရိယာများအတွက်ထုတ်လုပ်မှုတစ်ညှိနှိုင်းရေးမှူးရှာကြသည်။ dubs အပါအဝင်လိုအပ်အဖြစ် content များအတွက်အစီအစဉ်များကိုပြ, ညှိနှိုင်း, ဗီဒီယိုဖိုင်နှင့်ဂီတသုတေသနတွေ့ဆုံအမျိုးမျိုးတာဝန်များကိုအတွက်အကူအညီပေးနေတာတစ်ခုလုံးကိုဦးစီးဌာန (1 ဒါရိုက်တာ 1 ထုတ်လုပ်သူကြီးကြပ်, 1 အကြီးတန်းထုတ်လုပ်သူ,6ထုတ်လုပ်သူများနှင့် 1 တွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူ) မှပံ့ပိုးကူညီမှုအဖြစ်ဒီအနေအထားလုပ်ဆောင်ချက်များကို , databases ကိုများနှင့်ခြေရာခံနှင့်အခြားယေဘုယျအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ထောက်ခံမှုတာဝန်များကိုကို update ။ ဒီအနေအထား, ရှိသမျှပစ္စည်းများကိုများ၏ပို့ဆောင်မှုအပေါ်ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူသြဒိနိတ်ပြည်တွင်းရေးပြောင်းပြန်အားဖြင့်ထုတ်လုပ်ပြီးသစ်ကိုပစ္စည်းများနှင့် Out-of-အိမ်သူအိမ်သားဘဏ်ဍာထံမှပစ္စည်းများရရှိခဲ့သည်။ ဒီအနေအထားလိုအပ်နောက်ထပ်အရေးပါတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနိုင်စွမ်းသည် ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲရေး International အပေါ်
အဘယ်သူမျှမဒီဂရီလိုအပ်နယူးယောက်မှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံနေရာအသိပညာတစ်ပေါင်း (သို့မဟုတ်သင်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်သည်, ဘဏ္ဍာရေးနှင့်စာရင်းကိုင်နှင့်အတူအတှေ့အကွုံရှိရမည်, Excel နှင့် Quickbooks အားလုံးကိုအခင်းအကျင်းအတွက်ပညာရှင်ပီသစွာအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းနှင့်အလုပ်အဖြစ်အလုပ်လုပ်နိုင်တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်ရမည်! ) * * ချက်ချင်းအီးမေးလ်များကိုတုံ့ပြန်စွမ်းဆောင်ရည်နေရာများ (စျေးနှုန်းနှင့်ရရှိနိုင်မှု) ရှာဖွေနေ * ဘတ်ဂျက်စီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်ကုမ္ပဏီမန်နေဂျာမှသတင်းပို့မကြာခဏဘတ်ဂျက်အစီရင်ခံစာများ *
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာအပေါ်
ဒီအနေအထားဟာရေရှည်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ျာကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာပေအတွက်အကျိုးစီးပွားနှင့်တစ်ဦးခိုင်အစုစုကိုရပါလိမ့်မယ်။ min ။5နှစ်ပေါင်းအတွေ့အကြုံ, BFA ပိုမိုနှစ်သက်သည်။ - eBook ပုံစံချပေးနှင့်အဆင်အပြင် - ပရင့်ထုတ်ရန်စာအုပ်ပုံစံချပေးနှင့်အဆင်အပြင် - အွန်လိုင်းဂရပ်ဖစ်ထောက်ခံမှု (အီးမေးလ်, ကြော်ငြာတွေ, နဖူးစည်းစာတမ်းတွေ) - နည်းပညာနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ - မျိုးစုံစီမံကိန်းများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်နိုင်ခြင်း - Photoshop ကို / InDesign နှင့်အတူကျွမ်းကျင်မှု
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုညှိနှိုင်းရေးမှူးထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်
Response Create / အမျိုးမျိုးသော Deliverable ဆိုကှာဟ / စိုးရိမ်ပူပန်မှုများမှပေးအပ်သောတိကျတဲ့ကွန်ယက်ကိုအဆက်အသွယ်ထည့်သွင်းရန်တစ်ဦးချင်းစီ 3rd ပါတီစီမံကိနျးအတှကျကွန်ယက်အဆက်အသွယ်စာရင်း Create တိကျမှန်ကန်မှုအဘို့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအမျိုးမျိုးသော Deliverable လက်ခံရရှိနှင့်စီမံခန့်ခွဲရန်သတင်းပို့ခဲ့ကြသည့်အခါထည့်သွင်းရန်တစ်ဦးချင်းစီစီမံကိနျးအတှကျ 3rd ပါတီခြေရာကောက် Grid ထိန်းသိမ်းပါ စီမံကိန်း (နောက်ဆက်တွဲ B.1) 3rd ပါတီမှ updates များကိုလုပ်ကိုကူညီပါတစ်ခုချင်းစီစီမံကိန်းအတွက်ထုတ်လုပ်မှု cos မှလက်စွဲစာအုပ်အီးမေးလ်သို့မဟုတ်မေးလ် 3rd ပါတီပေးပို့လက်စွဲစာအုပ် deliverables နှင့်တစ်ဦးချင်းစီထုတ်လုပ်မှုပူးတွဲထုတ် Send / Update ကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် Air ကိုဇယားအီးမေးလ်များထံမှပေးပို့ spec လက်ခံမှုစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိအတည်ပြု အားလုံးကွန်ယက် ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှု International အပေါ်
Feature ကိုရုပ်ရှင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီကဒီနွေဦးဖျော်ဖြေရေးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်အတှေ့အကွုံရရှိမှုအတွက်ခိုင်မာတဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူစမတ်, ယုံကြည်စိတ်ချရသော Intern များရှာတတ်၏။ တာဝန်များပြေးများနှင့်အခြေခံရုံးစီမံခန့်ခွဲရေးတာဝန်များကိုအောင်, အညွန့်များအတွက်ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်, ရုပ်ရှင် / ပြိုင်ဘက်သုတေသနအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, ပါဝင်နိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်, ထုတ်လုပ်မှုနှင့် script ကိုလွှမ်းခြုံနှင့်အတူ Post-ထုတ်လုပ်မှုအသင်းများကိုကူညီ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ, လုံ့လဝိရိယ Hard-အလုပ်လုပ်နှင့်သင်ယူဖို့စိတ်အားထက်သန်ဖြစ်သင့်သည်။ ရာထူးမရတဲ့ဖြစ်ပြီးကောလိပ်ကရက်ဒစ်လိုအပ်သည်။ ရာထူးသင်တို့ကိုလည်းကားတစ်စီးနှင့်ဆဲလ်ဖုန်းရှိရမည်လိုအပ်သည်။
ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာဖန်တီးမှုပစ္စည်းများအချိန်ပေါ်နှင့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်ထုတ်လုပ်သေချာအောင်တာဝန်ရှိသည်ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာဒီဇိုင်နာများ, စာရေးဆရာများနှင့် Illustrator နှင့်အတူအနီးကပ်ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နှင့်မိတ်ဖက် (စျေးကွက်, PR စနစ်, စားသုံးသူထုတ်ကုန်, ဒစ်ဂျစ်တယ်, အရောင်း, ဥပဒေရေးရာနှင့်စံ & အလေ့အထများ) နဲ့အလုပ်လုပ်အလုပ်အကိုင်အဆင့်အတန်းနှင့်တိုးတက်မှုဆကျသှယျဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာထုတ်လုပ်မှုဒါရိုက်တာမှသတင်းပို့ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့်လွတ်လပ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖြင့်တရားစွဲဆိုနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်အလုပ်လုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ သူ / သူမလည်းသည်အခြားဌာနများအတွက်သူ / သူမ၏ counterparts တွေကိုနှင့်အတူခိုင်မာသော, အပြုသဘောအလုပ်လုပ်ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့မျှော်လင့်ထားလိမ့်မည်။ ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာကလည်းလိမ့်မည် ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်ပေါ်
နေ့စဉ်နှင့်အနာဂတ်ပြပွဲများအတွက်ဧည့်သည်များ၏သုတေသနနှင့်ညှိနှိုင်းနှင့်အတူကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Assist ။ လိုအပ်အဖြစ် Scripts, dubbing တိပ်ခွေများနှင့်အခြားတာဝန်များနှင့်အတူအိမ်ရှင် (s) ကို Assist ။ နောက်ဆုံးနေ့အောက်မှာရှာရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်ဗီဒီယို။ ဂရပ်ဖစ်များနှင့်ဖောင်ညှိနှိုင်းအတွက် Assist ။ တိပ်ခွေစာကြည့်တိုက်ထိန်းသိမ်းထားသည်။ ပြန်ဖွင့်ဘို့အတိပ်ခွေကိုသြဒိနိတ်။ သတင်းစာပညာ, ဆက်သွယ်ရေးသို့မဟုတ်ဆက်စပ်စည်းကမ်းအတွက် BA ဘွဲ့ / BS ။ ရုပ်မြင်သံကြား / အသံလွှင့်နောက်ခံပိုမိုနှစ်သက်သည်။ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လူ့နှင့်အဖွဲ့အစည်းကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်။ တခါမှာအများအပြားတာဝန်များကို juggle နိုင်အားကောင်းတဲ့အရေးအသားကျွမ်းကျင်မှု။
ဖျော်ဖြေပွဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပညာရေး၏ Manager ကို
ဟာ Off comments ဖျော်ဖြေပွဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပညာရေး၏ Manager ကိုပေါ်
ယောဘ SUMMARY: ဖျော်ဖြေပွဲထုတ်လုပ်မှုနှင့်ပညာရေး၏ Manager ကသံစုံတီးဝိုင်းစစ်ဆင်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်နှင့် PSO ရဲ့ Bravo! ပညာရေးအစီအစဉ်များ။ S / သူအားလုံးသံစုံတီးဝိုင်းဖြစ်ရပ်များ (ဖျော်ဖြေပွဲ, အစမ်းလေ့ကျင့်, ပညာရေးအစီအစဉ်များ, etc) ကိုထိရောက်စွာ, ချောချောမွေ့မွေ့ပြေးနှင့်ငွေရေးကြေးရေးတာဝန်ရှိထုံးစံ၌ဖြစ်ကြောင်းသေချာ။ အဆိုပါဂီတသမားနှင့် PSO စီမံခန့်ခွဲမှုအကြားတစ်ဦးဆက်ဆံရေးရုံးအဖြစ် Manager ကိုလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ S / သူ, ဦးဆောင်ကိုသြဒိနိတ်, အချိန်ဇယားနှင့် Bravo အားပေးအားမြှောက်! လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ဆရာ, ကျောင်းသားများအဖွဲ့နှင့်တွဲဖက်အဖွဲ့အစည်းများ, ဂီတသမားများနှင့်စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအတွက်အမှတ်လူတစ်ဦးအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ တေးဂီတဒါရိုက်တာဖို့ "တွေက dotted line ကို" တာဝန်ဝတ္တရားတွေနဲ့တိုက်ရိုက်အလုပ်အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဖို့အနေအထားအစီရင်ခံစာများ။ လစာအတှေ့အကွုံညီရှိ၏ အကျိုးခံစားခွင့်ကနျြးမာရေးတို့ပါဝင်သည် ...
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက်, Maury အပေါ်
Maury ထုတ်လုပ်မှု၏အားလုံးရှုထောင့်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တွဲဘက်ထုတ်လုပ်သူများကူညီပေးဖို့ထုတ်လုပ်မှု Assistant ရှာဖွေနေသည်။ ဤသည်ကိုပြသပါရာထူးတစ်ခု Run ကိုဖြစ်ပါတယ်။ တာဝန်များသူတို့ပြပွဲအရည်အချင်းများ / ဟောပြောချက်ပြပွဲနှင့်အတူ RequirementsBasic အရည်အချင်းများနိမ့်ဆုံး6လအတွင်းတီဗီအတွေ့အကြုံ, သတင်းသို့မဟုတ်တရားရုံးအစီအစဉ်ကို, သို့မဟုတ်အခြားသက်ဆိုင်ရာပေါ်တွင်ပေါ်လာဖို့အားလုံးကိုပြပွဲနေ့က proceduresBooks ဧည့်သည်များအတွက် tapingInvolvement အဘို့မြို့၌ရှိကြ၏နေစဉ်ရှိုးပေါ်တွင်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်သူကိုဧည့်သည်များနှင့်အတူအလုပ် (Intern များကိုအပါအဝင်) အတှေ့အကွုံကို Microsoft Office ကိုအတွက်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် internetBachelor ရဲ့ဒီဂရီစွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝလိုအပ်ချက်များစိတ်ဝင်စားကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ, considered.Must Stamford အတွက်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ဖြစ် nbcunicareers.com မှတဆင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း / CV ကိုတင်ပြရမယ် ...
Morristown, NJ အတွက်အနုပညာစင်တာတွင်ဖျော်ဖြေအဆိုပါ Mayo အဘိဓါန်အဆိုပါပြဇာတ်ရုံရဲ့ဘဏ်ဍာအားလုံးရှုထောငျ့ကိုသြဒိနိတ်တစ်ထုတ်လုပ်မှု Manager ကိုရှာတတ်၏။ ဇာတ်နာအောင်ပြောခြင်း, ကခုန်, Music, အော်ပရာ, ဖျော်ဖြေပွဲ, ရုပ်ရှင်နှင့်ဟောပြောပွဲဘဏ်ဍာအဘို့အခေတ်ပြိုင်နှင့်ရိုးရာဖြစ်ရပ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်တင်ဆက်မှုနည်းစနစ်၏အသိပညာရှိရမည်။ ထုတ်လုပ်မှုမန်နေဂျာ, အုပ်ချုပ်ရေး, ကြိုတင်နှင့်နည်းပညာရှုထောင့်အပါအဝင်ထုတ်လုပ်မှုဌာန၌ရှိသမျှသောစစ်ဆင်ရေးကြီးကြပ်နည်းပညာဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့် IATSE ယာဉ်အမှုထမ်းများ၏လှုပ်ရှားမှုများညွှန်ကြားအဖြစ်နေရာမှာတည်ခင်းဧည်တစ်ဦးချင်းစီအဖြစ်အပျက်၏အောင်မြင်သောအကောင်အထည်ဖော်မှုသေချာ။
ထုတ်လုပ်မှုရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက် DP / ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်မှုရှာ
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုအပေါ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်များအတွက် DP / ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်မှုရှာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီအကြောင်းကို3ရက်သတ္တပတ်၏အကာလအတွက်အလုပ်သမားနေ့အပြီးရိုက်ကူးဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့အင်္ဂါရပ်အရှည်ရုပ်ရှင်, များအတွက် DP / ရိုက်ကူးရေးခေါင်းဆောင်ကြိုးစားနေသည်။ တည်နေရာထက်ပိုမိုဖွယ်ရှိ Hamptons အတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့အလွန်အနုပညာနှင့်စမ်းသပ်ဆဲသောသူသည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုလိုချင်ပါတယ်။ တစ်ဦး reel နှင့်သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ပေးပေးပါ။ လျော်ကြေး: TBD
စတင်တည်ထောင်သူဟာ Emmy & ကမ္ဘာလုံးသုံးသွားလာရင်းနှင့်အတူရုပ်ရှင် / ရုပ်မြင်သံကြားစက်ထုတ်လုပ်သူအမည်စာရင်းတင်သွင်း projectsfor 2013 အချိန်ပြည့်ထုတ်လုပ်မှု / ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာလက်ထောက်ရှာတတ်၏။ ဤသည်က start ကနေ finish ကိုမှ theproduction ဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်လိုသူထုတ်လုပ်သူများအယောင်ဆောင်များအတွက် aperfect အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အမြန်-စဉ်းစားတွေးခေါ်, လွတ်လပ်သောဖြစ်, အချို့အတှေ့အကွုံအရေးအသားလွှမ်းခြုံ, ဇာတ်ညွှန်း developmentand ကုမ္ပဏီလုပ်ပိုင်ခွင့် complimentsthe ကြောင်းသင့်လျော်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ပစ္စည်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်ရှိရမည်။ လုပ်ငန်းတာဝန်များပါဝင်သည် (သို့သော်ကန့်သတ်မပါ) ကိုဖုန်းလုပ်ငန်းတာဝန်များ, အချိန်ဇယားကိုစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်နောက်ဆုံးမူကြမ်းနှင့်ပီစီ operating system အတွက်တတ်ကျွမ်းဖြစ် representatives.Must နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့။ စက်မှုလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီများနှင့်လူသိများစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ, အေးဂျင့်များ, နွားစားခွက်စသည်တို့ကို၏ Generalknowledge တစ်ပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရာထူးချက်ချင်းစတင်နိုင်ပါသည်။ non-လစာအလုပ် ...
ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် / စတူဒီယို Manager ကို
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်မှုလက်ထောက် / စတူဒီယို Manager ကိုပေါ်
ဒါကတစ်ခုထူထောင်, အသေးစားနှင့်စွယ်စုံထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ join ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် UNIQUE အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေး Silverman Productions ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးများအတွက်စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးဖန်တီးမှု & နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာ solver ရှာကြံနေပါတယ်။ လေ့လာသင်ယူနှင့်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူကြီးထွားဖို့ပြင်းပြတဲ့ဆန္ဒအနည်းဆုံး (2) နှစ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကစားသမားရှာဖွေနေ။ လောလောဆယျဒီနွေရာသီမှာရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အင်္ဂါရပ်ရုပ်ရှင်အပေါ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, လက်ျာကိုယ်စားလှယ်လောင်းလည်းတစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အဘက်ဘက်မှပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားအကို client လှုပ်ရှားမှုအသံလွှင့်ကြော်ငြာများ, တီဗီ Programming, နယူးမီဒီယာနှင့်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပုံနှိပ်ပါဓါတ်ပုံပါဝင်ပါသည်။ ...
ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း / TECH စီမံခန့်ခွဲမှု
ဟာ Off comments ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း / TECH စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်
ဒါကတစ်ခုထူထောင်, အသေးစားနှင့်စွယ်စုံထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီ join ဖို့အရည်အချင်းပြည့်မီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် UNIQUE အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Silverman Producitons ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးနှင့်ဓာတ်ပုံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်သူတစ်ဦးကောင်းစွာ rounded နှင့်နည်းစနစ်စိတ်တူကိုယ်တူနောက်ခံနဲ့ဖန်တီးမှုနည်းပညာရှင်များနှင့်ပြဿနာ solver ရှာကြံနေပါတယ်။ client လှုပ်ရှားမှုထုတ်လွှင့်ကြော်ငြာ, တီဗီ Programming, ကွန်ယက်ပရိုမိုးရှင်းများ, အသစ်သောမီဒီယာ, ကော်ပိုရိတ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်စီးပွားဖြစ်ပုံနှိပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးဖြစ်စေပါဝင်ပါသည်။ အရည်အချင်းပြည့်မီသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့်အတူကျွမ်းကျင်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်: DIT / ဒေတာများကို ManagementApple Operating SystemsPhotoshopFinal Cut Pro အခြားလိုအပ်ချက်များကိုအလုပ်လုပ်အသိပညာများပါဝင်သည်: ဒစ်ဂျစ်တယ်ကင်မရာစနစ် (အနီရောင်) ဓါတ်ပုံ (Nikon ကင်မရာ) သတ်မှတ်မည်ဆောက်လုပ်ရေး / အင်ဂျင်နီယာ (အနည်းဆုံး) FileMaker ProHTMLFTP နေ့စဉ်တာဝန်ဝတ္တရားများပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်မဟုတျပါလိမ့်မယ် ကန့်သတ် ...
979 ၏စာမျက်နှာ 982«ပထမဦးစွာ...950960970«977978979980981»...နောက်ဆုံး»